DHAGEYSO Xaflad lagu maamuusayay 15 May oo xalay ka dhacday magaalada Muqdisho.
Kusimaha Madaxweynaha ahna Guddoonka Golaha shacabka Soomaaliyeed Maxamed Mursal Sh/raxmaan oo xalay ka qeyb galay Munasaabadda lagu xusayay sanad guuradii 75 ee kasoo wareegtay aas aaskii dhalinyaradii SYL ayaa hambalyo u diray muwaadiniinta Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada sidoo kalena kula dardaarmay in wadankooda dhistaan.
Maxamed Mursal Sh/raxmaan gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in dhaliyarada Soomaaliyeed looga baahan yahay ka qeyb qaadshada dhismaha Qaranka ayna iska ilaaliyaan fikradaha ay faafinayaan waxa uu ugu yeeray maleeshiyaadka nabad diidan.
Gudoomiyaha ayaa sheegay in jiilka maanta ay shaqo badan u taalo loogana baahan yahay samatabixita dalkooda.
Munaasabada 15-ka May oo xalay magaalada Muqdisho lagu qabtay ayaa waxaa ka qeyb galay Ku simaha Madaxweynaha Dalka Soomaliya ahna Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Ra’isulwasaaraha Xukuumadda Soomaaliya , Duqa magaalada Muqdisho, Wasiirro ay ugu horeyso Wasiirka Dhalinyarada iyo Cayaaraha,Xildhibaanno iyo marti sharaf kala duwan,waana sanadkii 75 aad ee munaasabadaan la maamuusayay kadib 1943-kii oo ku beegnayd aas-aaskii ururkii gobonimo u dirirka Soomaaliya ee SYL.
← Miguna Miguna oo maanta dalka ku soo laabanayaa
Waaxda FBI oo baaritaano ku sameynaysa shirkadda Cambridge →